Sidee ayay u dhacday Ciyaartii dhexmartay Soomaaliya iyo Zimbabwe? – Hareerley News
Ciyaart oo ahayd mid si wayn ay u wada sugayeen dadka Soomaalida ayaa bilaabatay markii ay saacada Afrikada bari ahayd 4 galabnimo.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa labada dhinacba isku dayeen inay goolal la yimaadaan balse ma suuragalin.
Waxaa qeytii hore ee ciyaarta lagu kala nastay eber iyo eber.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa waxaay ku bilaabatay xamaasad islamarkana ciyaartooyda labada dhinac ayaa dardar cusub bilaabay.
Ciyaarta markii ay mareysay daqiiqadii 77aad ayaa waxa xulka kubadda cagta ee Zimbabwe ay dhaliyeen goolkii koowaad oo uu u dhaliyay Marshall munetsi.
Daqiiqadii 85aad ayaa waxaa goolka barbaraha u dhaliyay Soomaliya Cumar Maxamed,waxayna ciyaarta noqotay hal iyo 1.
Balse Daqiiqadii 86 ayaa waxaa goolka labaad Zimbabwe u dhaliyay ciyaaryahanka Admiral Muskwe,waxayna ciyaartu noqotay 2 iyo 1:
Daqiiqadii 90 ayaa waxaa Soomaaliya laga dhaliyay goolkii 3aad oo uu dhaliyay Khama Billiat.
Ugu dambeyntii ayaa waxay ciyaartu ku dhammaatay 3 iyo hal sidaasi ayayna guushu ku raacday Zimbabwe.
Qalbi-dhagax Oo gaaray Kismaayo & Soo dhaweyn loo sameeyay:-(Sawiro)
Magalada Kismaayo Ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose waxaa Maanta gaaray Cabdi Kariin Muuse (Qalbi-dhagax) oo ka mid ah Madaxda Jabhada ONLF,kaas oo hadda ka hor Dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay Itoobiya. Soo dhaweynta Qalbi-dhagax Ee kismaayo ayaa waxaa ka qeyb qaatay Masuuliyin katirsan Labada Gole Ee Dawlad GobaleedkaJubbaland,Xildhibaano ka tirsan Labada Aqal Dawladda Fadaraalka Somalia, […]
Xildhibaanada Beesha ku Matala Labada Aqal ee Dowlada Federaalka Oo kulan yeeshey ayaa waxaa kulankooda ku Sheegey is Wareeysi dheer ka dib in ay ka Wada hadleen dhamaan Degaanada ay ku Matalaan Beesha hadii ay ahaan laheyd dhanka Sisaasada,Amniga .dhaqaalaha iyo dhamaan Arimaha iyo Baahiyaha Bulshdu Tabaneyso. Xildhibaanaada ayaa intaasi ku darey in ay u […]
Uganda Airlnes Oo Duulimaad Toos ah ka Bilaabeysa Muqdisho:-(Sawiro)